17 Ịlaịja+ onye Tishbe, bụ́ otu n’ime ndị bi na Gilied,+ wee sị Ehab: “Dị nnọọ ka Jehova bụ́ Chineke Izrel dị ndụ,+ bụ́ onye m guzo n’ihu ya,+ igirigi agaghị ada, mmiri agaghịkwa ezo n’ime afọ ndị a,+ ọ gwụla ma m̀ kwuru ka o mee!”+
2 Okwu+ Jehova wee ruo ya ntị, sị:
3 “Si ebe a pụọ, tụgharịakwa gaa n’ebe ọwụwa anyanwụ ma zoo+ na ndagwurugwu iyi Kirit nke dị n’ebe ọwụwa anyanwụ Jọdan.
4 Ọ bụkwa mmiri si n’iyi ndagwurugwu ahụ ka ị ga na-aṅụ,+ m ga-enyekwa ugoloọma+ iwu ka ha na-ewetara gị ihe oriri n’ebe ahụ.”+
5 Ọ gara ozugbo mee dị ka Jehova kwuru,+ gaa biri n’akụkụ iyi ndagwurugwu Kirit nke dị n’ebe ọwụwa anyanwụ Jọdan.
6 Ugoloọma na-ewetakwara ya achịcha na anụ n’ụtụtụ nakwa achịcha na anụ n’anyasị, ọ nọkwa na-aṅụ mmiri si n’iyi ndagwurugwu ahụ.+
7 Ma o ruru na mgbe ụbọchị ụfọdụ gafere, iyi ndagwurugwu ahụ tara,+ n’ihi na ọ dịbeghị mmiri zoro n’elu ala.
8 Okwu Jehova wee ruo ya ntị, sị:+
9 “Bilie gaa Zarefat+ nke Saịdọn, birikwa n’ebe ahụ. Lee! M ga-enye otu nwaanyị di ya nwụrụ iwu n’ebe ahụ ka ọ na-enye gị ihe oriri.”
10 Ya mere, o biliri gaa Zarefat wee bata n’ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ; ma, lee! otu nwaanyị di ya nwụrụ nọ n’ebe ahụ na-akpa nkụ. O wee kpọọ ya òkù, sị: “Biko, were ihe kutetụrụ m mmiri ka m ṅụọ.”+
11 Mgbe ọ gawara ikute ya, ọ kpọrọ ya òkù wee sị: “Biko, wetatụrụ m achịcha.”+
12 Nwaanyị ahụ wee sị ya: “Dị nnọọ ka Jehova bụ́ Chineke gị dị ndụ,+ enweghị m achịcha ọ bụla,+ ma e wezụga ntụ ọka* nke juru ọbụ aka+ dị n’ime nnukwu ite nakwa obere mmanụ+ dị n’ime obere ite; lee, m na-akpata obere nkụ, m ga-abanyekwa n’ụlọ sie ihe mụ na nwa m ga-eri, anyị ga-eri ya wee nwụọ.”+
13 Ịlaịja wee sị ya: “Atụla egwu.+ Banye, mee dị ka i kwuru. Kama buru ụzọ si n’ihe dị n’ebe ahụ meere m obere achịcha,+ ị ga-ewepụtakwara m ya, e mesịakwa, ị ga-eme nke gị na nwa gị.
14 N’ihi na nke a bụ ihe Jehova bụ́ Chineke Izrel kwuru, ‘Nnukwu ite ntụ ọka ahụ agaghị agwụ, obere ite mmanụ ahụ agaghịkwa agwụ ruo ụbọchị Jehova ga-eme ka oké mmiri zoo n’elu ala.’”+
15 Ya mere, ọ gara mee dị ka Ịlaịja kwuru; o wee na-eri nri, ya na Ịlaịja na ezinụlọ ya, ruo ọtụtụ ụbọchị.+
16 Nnukwu ite ntụ ọka ahụ agwụghị agwụ, obere ite mmanụ ahụ agwụghịkwa,+ dị ka Jehova kwuru site n’ọnụ Ịlaịja.
17 O wee ruo mgbe ihe ndị a gasịrị na nwa nwoke nke nwaanyị ahụ, bụ́ nwaanyị nwe ụlọ ahụ, dara ọrịa, ọrịa ya wee sie ike nke na ume afọdụghị n’ime ya.+
18 O wee sị Ịlaịja: “Gịnị jikọrọ mụ na gị,+ onye nke ezi Chineke? Ị bịakwutewo m ichetara+ m njehie m nakwa igbu nwa m.”
19 Ma ọ sịrị ya: “Kunye m nwa gị.” O wee kupụta ya n’obi nwaanyị ahụ ma kuru ya gbagoo n’ọnụ ụlọ dị n’elu,+ bụ́ ebe o bi, wee nyiwe ya n’ihe ndina nke ya.+
20 O wee malite ịkpọku Jehova, sị: “Jehova bụ́ Chineke m,+ ọ̀ bụkwa nwaanyị a di ya nwụrụ nke m bi n’ụlọ ya dị ka ọbịa ka ị ga-eme ihe ọjọọ site n’ime ka nwa ya nwụọ?”
21 O wee gbatịa onwe ya n’elu nwa ahụ+ ugboro atọ ma kpọkuo Jehova, sị: “Jehova bụ́ Chineke m, biko, mee ka mkpụrụ obi+ nwatakịrị a bịaghachi n’ime ya.”
22 N’ikpeazụ, Jehova gere ntị n’olu Ịlaịja,+ nke mere na mkpụrụ obi nwatakịrị ahụ bịaghachiri n’ime ya, o wee dịrị ndụ.+
23 Ịlaịja wee kpọrọ nwa ahụ si n’ọnụ ụlọ ahụ dị n’elu kpọdata ya banye n’ụlọ ahụ ma kpọnye ya nne ya; Ịlaịja wee sị: “Lee, nwa gị adịla ndụ.”+
24 Nwaanyị ahụ wee sị Ịlaịja: “Ugbu a ka m maara na ị bụ onye nke Chineke+ nakwa na okwu Jehova nke dị n’ọnụ gị bụ eziokwu.”+
^ 1Ez 17:12*
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D11%26Chapter%3D17%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl